‘बादशाह जुट’ले उठाउला सुशिलको धर्मराउँदो करियर ? « Filmy Nepal
‘बादशाह जुट’ले उठाउला सुशिलको धर्मराउँदो करियर ?
Published On : 31 October, 2019 3:16 pm
अभिनेता सुशिल श्रेष्ठ नेपाली फिल्म क्षेत्रमा उदाउँदै गर्दा अभिनय भन्दा पहिले सुगठित शारिरिक बनावटले चर्चामा आएको नाम हो सुशिल श्रेष्ठ । ‘होस्टेल रिटर्न्स’ डेब्यू अभिनेताको फिल्म पहिले ‘सिक्स प्याक’ चर्चा बढि भयो । त्यसपछि फिल्म पनि हिट बन्यो उदाउँदो अभिनेताको ट्याग उनले पाए ।
तर त्यसपछि दोश्रो गाँसबाटै उनलाई ढुङ्गा लाग्यो । दोश्रो फिल्म ‘कारखाना’ पनि चलेन, ‘सायद २’ पनि पानी भन्न भ्याएन । लगातार सफलता चाख्न नपाएका सुशिलले यतिबेला राम्रो आशा बोकेको फिल्म ‘बादशाह जुट’ प्रदर्शनमा आएको छ । कार्तिक १५ (आज)बाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म आफ्नो करियरमा अर्थपुर्ण बन्ने आशा उनको छ ।
त्यसो त प्रेमकथाको फिल्मबाट डेब्यू गरेका उनले रिलिजको फिल्ममा जसरी पनि ब्रेकिङ न्यूज चाहने एक पत्रकारको भुमिका निभाएका छन् । राम्रो काम गरेर सबैमाझ चिनिने भुमिका निभाएका सुशिललाई अभिनयमा पनि राम्रो गरेर स्टारडम प्रमाणित गर्न ‘बादशाह जुट’ कति सफल हुन्छ त्यो केहि दिनमा थाहा लाग्नेछ ।
बुधबार बिहानदेखि मिडियामा चर्चा छ अभिनेता निखिल उप्रेती र राजेश हमालबीच टिमअपको समाचार । लामो
चर्चित सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराई स्टारर गीति भिडियो ‘बाटोको काँडा..’ सार्वजनिक भएको छ । राजधानीमा आयोजित